Oromoo:Ani har’as borus iftaanis yoomiyyuu miseensa ABOdha – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromoo:Ani har’as borus iftaanis yoomiyyuu miseensa ABOdha
Oromoo:Ani har’as borus iftaanis yoomiyyuu miseensa ABOdha
Oromoo : Ani har’as borus iftaanis yoomiyyuu miseensa ABOdha
Ani har’as borus iftaanis yoomiyyuu miseensa ABOdha
“Hin maqu karaarraa”
Warri akka bishaan gabateerraa asiif achitti raafamtan ergaa Artis Adnaan mohammed kanarraa maal hubattu?
Namni kaayyoo qabu akkana!
Goota sanyii gootaa!!
Namni Seenaa Isaa Hin Beekne Bishaan Gabatee Irraati,Garuma Argetti Jaallata.(Waaqoo Nooleetiin)
Oliibultii jireenyaa keenya keessatti Hadhaan Boru, Boruun Iftaani, Iftaaniin Wagga jedhaati Barri tokko kan lufu/dabruu fi kan itti aanus kan dhufu. Egaa bara dhufaa lufaa cufa keessatti baratuu bara jijjiira malee wanti bara dhufaa darbaa keessatti hojjetame cufti bakka hojjetametti haalaa fi amala isaa waliin Calaqqee Seenaatiin ibsama.
Bara dhufaa darbaa keessatti Seenaan dhalli namaa hojjetu, Gaariis ta’ee hamaa isuma hojetame ta’ee mul’ata; Nama seenessutuu Bareechee ykn Faallessee seenessa malee.
“Inni kan darbe hin beekne kan dhufu hin beeku” Gabroomfattoonni Habashaa Teediroos, Yohaannis, Minilik, Hayla Sillaasee,Dargii fi Wayyaaneen hundi isaaniituu Oromoo Gabroomsuu keessatti dhiibbaa fi dhiittan isaan raawwatan wal haa caaluuyyuu malee tokkolle kan Oromoof rifannoota agarsiise hin jiru; Rifannoonni silayyuu diina irraa hin eeggamu.
“Alagaa Ilkaan adii Halangeen/Alangaan isaa sadi” Gabroomfataan darabeen nu gabroomfate cufti isaaniituu Ilkaan Summiitiin nu ciniinee hanga ammaatti madaan isaa nurraa hin qoorre; Gochaan duguugginsa sanyi diinni darabeedhaan nurratti raawwate, Harma muraa fi harka muraan Aanolee, Caliin Calanqoo, Sanbanni Gurraachi dhumaatiin Irreecha Bishooftuu, Hadhas Caliin Calanqoo 2ffaa fi FDG fi FXG keessatti ajjechaan jumlaa diinni ilmaan Oromoo ijoollee umrii 9 hanga jaarsa umrii 70 irratti gaggeessaa jiru yomiiyyuu taanaan Godaannisa bara baraa waan calaqqee Seenaatiin dhalootaaf ibsaa deemnuudha.
“Harreen dhiittee Ilkaan wal keessaa hin baaftu” Diinni Oromoo cufti isaaniituu aangoo fudhachuu irratti Zawdii wal haa saaman malee, Oromoo gabroomsuun Lafee Oromoo cabsuun lafa Oromoo qoqqoodachuu irratti, qabeenya Oromoo saamuun ofiif dhameeffachuu irratti, walumaa galatti Oromoo namaa gadi taasisanii qe’ee fi qabeenya Oromoo iratti abbaa ta’uun Ol aantummaa ofii agarsiisuu irratti tokkuma.
“Jeedalli gogaa hoolaa uffattee jiraachuun” mala rakkoo yeroo jala ittiin miliquu duwwaati. Siyaasni akkuma maqaa isaa siyaaauma. Qabsoo fi siyaasni walitti hidhatan malee tokkoo miti. Waan ta’eefis OPDOn Oromoo fi Amaarri Seenaadhaan tokko, dhiigaan walitti makamneerra, Itiyoophiyummaan nuuf suusiidha kan jettu Akkasumas Amaarri Faannoo fi Qeerroon tokkummaa Itiyoophiyaatiif falmataa jiru, Dhiigni Oromoo dhangala’e kan Amaaraati fi olola fakkaataa akkanaa kanneen tarrisuun Siyaasa isaanii akkamitti of dura akka itti tarkaanfachiisaniidha malee tokkoyuu dhimma Oromoo fi Oromummaa irratti kan rarra’e Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf kan qabsoo gaggeessu hin jiru hin jiraatus; Akeekni isaanii QBO gaggeessuu miti.
Waan ta’eef nuti ilmaan Oromoo dhugumaan quuqaa fi quuqamni Oromoo nutti dhagahamu, Kaayyoo Goototni Wareegamtootni Oromoo Kumii kitiliin itti wareegaman Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa dhiifnee, Itiyoophiyaa, Itiyoopjiyaa,Itiyoophiyaa…Dheengaddas, Kalees, Hadhas Itiyoophiyaadhuma jechuun boruufis “ITIYOOPHIYUMMAA” leellisuuf dhama’uun Eenyummaa ofii wallaaluun burjaaja’aa ta’aa jiraachuudha. Kanaafi kan “Namni Seenaa Isaa Hin Beekne Bishaan Gabatee Irraati Garuma Argetti Jallata” jedheefis.
Gadaan keessa jirru gadaa tokkummaa gadaa of ta’anii wal ta’anii eenyummaa ofii ibsachaa Irree fi Onnee guutuun qabsoo itti jirru glmaan gahuun mirga abbaa biyyummaa keenya itti gonfannuudha malee, Gadaa “gaafaa sii dabde kan abbaa kee ajjeese waliin nyaadhu gaafa sii dabarte ammoo kan Saree kee ajjeese gumaa baafadhuu” tii miti.
Walumaa galatti Of ta’uun seera uumaa fi uumamaati waan ta’eef diina jala shullisuu dhiifnee of taanee wal taanee QBO irra jirru Sochii Warraaqsa Biyyoolessaa FXG Oromoyaa finiinsuun gabroomfatatti xumura haa goonuun dhaamsa kooti
VOICE OF AMHARA : የወያኔ የማጋጨት የመጨረውን ካርታ እንደተበላ ታወቀ